Fampihavanana inona izany - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Fampihavanana - inona io?
Isika mpitoriteny dia zatra indraindray mampiasa teny izay tsy azon'ny olona maro, indrindra ny kristianina vaovao na ny mpitsidika. Nampahatsiahivina ahy ny tokony hamaritana ny teny aorian'ny toriteny izay nataoko tato ho ato raha nisy olona nanatona ahy ary nangataka ahy hanazava ny teny hoe "fampihavanana". Fanontaniana mipetraka io ary raha misy olona manana izany fanontaniana izany dia mety ho an'ny hafa izany. Noho izany dia tiako ny hanokana io programa io amin'ny foto-kevitry ny Baiboly momba ny "fampihavanana".
Nandritra ny ankamaroan'ny tantaran'ny olombelona dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona. Manana porofo ampy isika amin'ny fitaterana ny fahadisoan'ny olombelona hifaneraserana, izay taratry ny fisarahana amin'Andriamanitra fotsiny.
Tahaka ny apostoly Paoly ao amin’ny Kolosiana 1,21-22 dia nanoratra hoe: “Ianareo koa, izay vahiny sy fahavalo tamin’ny asa ratsy fahiny, dia efa nampihavaniny ankehitriny tamin’ny fahafatesan’ny vatany mety maty, mba hanaovany anareo ho masina sy tsy misy tsiny ary tsy misy kilema eo anatrehany”.
Tsy Andriamanitra mihitsy no mila mihavana amintsika, tsy maintsy mihavana amin'Andriamanitra isika. Araka ny voalazan'i Paoly, ny maha-vahiny dia ao an-tsain'olombelona fa tsy ny eritreritr'Andriamanitra. Ny valiny nomen'Andriamanitra ny maha-olombelona dia ny fitiavana. Tia antsika mihitsy aza Andriamanitra, fony isika fahavalony.
Izao no nosoratan’i Paoly ho an’ny fiangonana tany Roma: “Fa raha nampihavanina tamin’Andriamanitra isika tamin’ny nahafatesan’ny Zanany, fony mbola fahavalontsika, mainka ny hamonjena antsika amin’ny fiainany, rehefa nampihavanina indray isika ankehitriny.” Rom 5,10).
Milaza amintsika i Paoly fa tsy mijanona hatreo izany: “Fa izany rehetra izany dia avy amin’Andriamanitra, Izay nampihavana antsika taminy tamin’ny alalan’i Kristy sady nanome antsika ny fanompoana momba ny fampihavanana. Satria Andriamanitra tao amin'i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahotany ho azy ... "(2. Korintiana 5,18- iray).
Andininy vitsivitsy taty aoriana i Paoly dia nanoratra ny fomba nampihavanan’Andriamanitra tao amin’i Kristy izao tontolo izao tamin’ny tenany: “Fa tsy maintsy ho sitrak’Andriamanitra ny hitoeran’ny be rehetra ao aminy, ary Izy no nampihavanany ny zavatra rehetra taminy, na etỳ an-tany, na any an-danitra. fiadanana amin’ny rany teo amin’ny hazo fijaliana” (Kolosiana 1,19- iray).
Tamin'ny alàlan'i Jesosy dia nampihavan'Andriamanitra tamin'ny olona rehetra ny olona rehetra, izay midika fa tsy misy olona tafasaraka amin'ny fitiavana sy herin'Andriamanitra. Toerana iray natokana ho an'ny olona rehetra izay efa nipetraka teo ambonin'ny latabatra fihinan'Andriamanitra. Saingy tsy ny rehetra no nino ny tenim-pitiavan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka ao amin'izy ireo, tsy ny rehetra no nanaiky ny fiainany vaovao ao amin'i Kristy, niakanjo ny akanjo fampakaram-bady izay nomanin'i Kristy ho azy ireo ary naka ny latabatra.
Izany no mahatonga ny fampihavanana - kendrenay ny manaparitaka ny vaovao tsara fa Andriamanitra efa nampihavanin'izao tontolo izao taminy tamin'ny alàlan'ny ran'i Kristy ary tokony hataon'ny olombelona rehetra. mino ny vaovao tsara, mitodika any amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana, maka ny hazo fijaliana ary manaraka an'i Jesosy.
Ary inona no vaovao mahafaly izay. Andriamanitra anie hitahy antsika rehetra amin'ny asany mahafaly.